musha > Travel Europe > Top European Train Tours haufaniri Miss
Vatariri kwese nguva dzose chinoshamisa uye isu kuzviita kuwana maguta yakanaka, nhoroondo imwe nyika kana tsika dzakasiyana chaizvo needu. zvisinei, haufaniri kuenda kure kumusha wanikidza nzvimbo yakanaka. Kune vashoma European chitima Tours pamwe rakasiyana runako Hapana mubvunzo vakakodzerwa nzvimbo yedu mufambi wacho chido mazita. From fadza maguta European kune misoro pamwe nevapfumi nhoroondo uye nemagariro zvinofurira, tora nguva kuziva izvo maguta kushanyira.
Heano European chitima Tours haufaniri kurasikirwa:
Tiende zvishoma inodziya nyika, zvakananga, yakaisvonaka munharaunda Basque Country. Pano tinowana chii guta guru rechipiri European retsika yaiva 2016: San Sebastian. Izvi guta rakanaka riri kuchamhembe kwemhenderekedzo nguva dzose misoro nyika machati nokuda kwayo gastronomic pa uye ayo yainakidza Nightlife. Pane rimwe divi, Surfing, mapato uye musingamhanyi-mhanyi chinhu iwe achawira rudo. Zvakajairika kuwana zviitiko pamusoro ndimi, mumhanzi, uye kutamba kumativi ose eguta. saka, it is one of the greatest in Speini uye chikamu chedu European chitima Tours kushanyira uye vanopedza zuva kuziva zvayo zvakanaka nzvimbo uye kupedzisa manheru pamwe inonaka chisvusvuro uye cocktaileja pagungwa.
In mumwoyo Jerimani, inenge awa kubva Berlin, pane rimwe guta haufaniri kurasikirwa. Leipzig ari kuramba zvichiitika sendarama ano uye zvimwe pane guru. Pamwe imhaka zvayo nerakakurumbira nhoroondo, chokuita mazita akafanana Bach uye Wagner; kana, zvichida, nokuti ayo makuru mitema dzezvimwe, asati aizokundwa dzokufungidzira nemaoko. Zvingavawo kuti mweya wayo nyarara, apo iwe uye mumhanzi uri hunoshamisa. Kana toreva kwazvo European chitima Tours kuenda, uyu ndiye zvirokwazvo zviripo.
Valenza kuna Leipzig Zvitima
Berlin kuna Leipzig Zvitima
Hanover kuna Leipzig Zvitima
Hamburg kuna Leipzig Zvitima
The West Rhine Railway European Train Tours, Jerimani
Nokuti munhu wose anoda akasvibirira, knockout runako, nematende, uye madokero akavashambidza yemizambiringa, ichi tatamuka yevedza achitevedza Rhine River ndipo unofanira kuenda. The nechitima tasva pakati maguta German Cologne uye wokuMainz mumwe zvauchasangana kurangarira nokusingaperi. Its mufananidzo-hwakakwana nharaunda achasiya iwe kufema! romantics True vanotenda harinzwi anofara uye fairytale zvemashiripiti vauchazoramba rumbidza kuti mashiripiti nematende peeking kuburikidza mitema yemizambiringa. The West Rhine njanji anozivikanwa munyika yose sezvo chikamu "Romantic Rhine" rwendo, saka kana uine munhu waunoda kuunza pamwe, kudaro. Uchava kuva nguva chisingakanganwiki, zvakafanana nevamwe vazhinji vakaita iyo West Rhine njanji chikamu chavo cheEurope chitima nzendo.
Iyo yakanaka Lyon ndiro guta rechitatu pakukura mu Furanzi uye wechokwadi simba pakati nyika. Zviri chairo chairo zvikuru liveable uye akadzikama rwendo kupfuura guta, kupa varaidzo pamakona ose. Lyon ane zvose: mamiziyamu, mumaresitorendi, boutiques, uye vokutanga zvitoro, uyewo nhamba huru nembariro netsvimbo. Ichokwadi zvakare noutano University guta, zviripo kunoshanyira yako European chitima Tours. ezvivako yakatarisana Rhone River, guru mumapaki, uye ezvinhu chokuzvirumbidza siyana French tsika zvinofurira - chii haasi kuda?
Marseilles kuenda kuLyon Highspeed Chitima
Amsterdam kuenda kuLyon Highspeed Chitima
[https://www.youtube.comwatch?= Ari mozmhlEKk0E
No European chitima Tours makazadziswa pasina vakatasva kuburikidza picturesque nzizi nemakomo Tuscany. nharaunda iyi nechepakati Italy zvinowanika mukare zvinotyisa uye inopa wandei pfungwa mubereko zvachose here anofanira kushanyira. Kubva zvikuru iconic Renaissance art Michelangelo uye Botticelli kuti wakanakisisa mabasa Mother Nature ari Apennines, Tuscany ndiye nakisa. A zvakanaka vakaronga chitima rwokuparidza aigona kutora iwe pamwe Gungwa Tyrrhenian pamhenderekedzo, kana kurega unoona yemizambiringa famed pamusoro Chianti.
Milan kuna Chianti Castellina Zvitima
Florence kuna Chianti Castellina Zvitima
Naples kuna Chianti Castellina Zvitima
Rome kuna Chianti Castellina Zvitima
Save A Train kunokubatsira bhuku chitima nokwawaienda mu 3 maminitsi, panguva yakachipa pashiri rates kutorerwa obnoxious Réservation yechikoro!
Unoda embed yedu Blog pambiru uri paIndaneti, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-european-train-tours%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)